July 2017 - Page 3 of 14 - iftineducation.com
aadan21 / July 28, 2017
Jirkaagu marka uu caafimaad qabo, xilliga Galmada isaga ayaa maamulaya fariimaha iyo amarada ay maskaxdu u soo dirto, balse waa in aad adigu garato oo aad ogaato astaamaha iyo calaamadaha ka muuqan kara xaaskaaga iyo ninkaaga, sida calaamadaha muujinaya rabitaanka, Raaxada, hurdada, Xannuunka iyo laxawga, ha isku qaban indhahaaga si ku tala-gal ah, wadaaygaagu waxa uu…
waxyaabaha dareenka kiciya galmada ka hor
Waxa lagayaabaa in dhallinyarada qaarkeed gaar ahaan raggu ay u arkaan, in lammaantoodu ay jeceshehay hadal dabacsan oo malaha ku lammaanan jawiga Galmada, hayeeshee taasi maba ah mid ka turjumeysa xaqiiqada dhulka taal. Marka ay Galmadu billaabato, dareenka lammaanayaasha caafimaadka qabaa, waxa uu intiisa badan xoogga saaraa dhanka raaxada, taasna waxa sabab u ah farriimaha ay maskaxdu u dirto…
hadalada dareenka gacalisadaada kiciya
Sameey oo yeel sida iyo waxa uu doonayo qofka lammaanahaaga ah, tusaale nooca dharka aad soo xiraneyso, goobta aad ku kulmeysaan, habka ay galmadu u dheceyso, haddii aad sidaas yeesho ma dhici doonto dhibaato qalqalisa jawiga aad ku jirtaan, hayeeshee haddii aad diiddo waxa uu doonayoo wadaygaagu, waxa dhici karta dhibaato jawiga ka dhigto mid xun, oo ay…
Haddii aad guursatay iyo haddii aad hadda dooneyso in aad yagleesho guri, ugu horreyn waa in aad ogaato in guurka iyo qoysnimadu aanay kamid ahayn, wixii aad ku soo baratay fasaladaadii Sayniska, islamarkaana aanay ku jirin waaya-aragnimada aad si uun uga hesho bulshada aad la nooshahay, reernimada iyo galmadu waxa ay xambaarsan yihiin caqabado waaweyn oo badan. Halkan waxa…
MA XISHOOTO “Iguma filno kaliya in la ii salaaxo Naaska, waxaan rabaa wax ka badan?
aadan21 / July 27, 2017
MA XISHOOTO “Iguma filno kaliya in la ii salaaxo Naaska, waxaan rabaa wax ka badan? Umad walba waxa ay leedahay caado iyo dhaqan u gaar ah ayadoona taa ay tahay awood Eebe uu ku maneystay bulshooyinkasi, waana mid keentay in maqaalo iyo bayaan laga sameeyo wacyiga Galmada saxda ah ee u dhaxeeya labada dhinac ee doonaya in ay isu…
KORDHINTA RAAXADA IYO MACAANSIGA GALMADA.
Awoodda dareenka macaansi waxa uu ku xiran yahay sida ay isu haystaan labada isu galmoonaya iyo dhaqdhaqaaqooda xilliga ay galmadu dhacayso, taasi oo iyana ku xiran hadba aqoonta ay u leeyihiin arrintaasi. Waxa jirtay in aqoon yahan hore uu yiri: (Macaanta galmadu ma waarto haddii loo joogteeyo hal qaab, oo aan lagu beddelin qaabab kale). -Ka hortagga dhibaatooyinka iyo dhaawacyada…
SALAAXISTA HAWEENEYDU INTAAN LA BILAABIN GALMADA Salaaxista haweeneydu, kuma koobna oo qura labada naas, balse waxa loo baahan yahay in la salaaxo meelo kale oo jirka kamid ah sida; labadeeda warqood, gudaha bowdooyinka, gumaarka, faruuryaha cambarka, iwm. Waxaan muran ku jirin in haweeneyda ninkeeda ay jeceshahay uu labada cajar dhexdooda kaga salaaxo mid kamid ah labadiisa gacmood, isaga oo isla…
GALMADA BADAN IYO DHIBKA KA IMAN KARA
GALMADA BADAN IYO DHIBKA KA IMAN KARA Hadii ay galmadu u dhacdo qaabka iyo tiradii loo baahnaa waxa uu qofku ka dhaxlayaa Faa’iidooyin dhorw ah Sida: 1-Jirka iyo maskaxda ayey firfircooni u yeeshaa. 2-Dareemayaasha ayey fududeysaa. 3-Madax wareerka ayey bi’isaa 4-Waswaaska ayey qofka ka qaadaa. 5-Araga iyo wadnaha ayey wanaajisaa, 6-dhiiga ayey cosbooneysiisaa. 7- Waxa ay kaalmeysaa qashin saarka…
RAAXADA GALMADA XAASKAAGA WAA DAWO JIRKA U ROON
Galmada raaxada guurku maaha oo kaliya in ay isu soodhawayso lamaanaha, caruurna ku soo biiriso qoyska. Laakiin galmadu waxa kale oo ay wax ka tartaa miisaan dhimida. Waxaa ku xoogaysta jirka. Hadaba aan halkan hoose ku soo koobno faaiidada ay leedahay: Cimrigaago oo ay dheerayso Sida ku xusan baaritaan ay samaysay the American Association Of Retired Person ayaa waxa uu…
GALMADA KURSIGA WAA SIDEE MA RAAXO BAA
Waxaad ogaanaysaa marka aad rabto inaad xaaskaaga u tagto sida ugu macaan ay ka hesho hadabda waxaa jira qaabab badan la isgu tago, ajkis web site waa daran yahay iska jir sxb Sida foorarka oo kale inakstoo naagaha soomaali ay nacabyihiin waxaa kale oo aad halkaan ka akrisan kartaa galmada qaabka ugu macaan badan oo ay naagaha ka helaan, naago…